Is-badellada NISA - RW Rooble oo kaalintiisa qaatay | KEYDMEDIA ENGLISH
Is-badellada NISA - RW Rooble oo kaalintiisa qaatay
Sida la saadaalinayo is-badello waaweyn ayaa ku dhacaya hay’adda NISA, waxaana is-badalladaas qeyb ka ah, magaca hay’adda oo loo baddeli doono, Federal Intelligence And Security Agency [FISA].
MUQDISHO, Soomaaliya – Mahad Maxamed Salaad, oo dhawaan la wareegay xilka Agaasimaha guud ee Hay’adda nabad suggidda iyo sirdoonka Qaranka, ayaa taliyaha Hay’adda u qaabilsan Gobalka Banaadir u magacaabay Muxidiin Mohamed Jimcaale.
Keydmedia Online, ayaa xasuusata in 15 September 2021, uu Sareeye Guud, Bashiir Maxamed Jaamac (Goobe), isla xilkaan u magacaabay, Muxidiin Mohamed Jimcaale (Warbac), hayeeshee, magacaabiddaas ayaan hirgalin muran siyaasadeed awgiis.
Sarkaalkaan wuxuu muddo dheer ka tirsanaa hay’adda, wuxuu aad ugu dhow yahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wuxuuna qeyb ka ahaa saraakiil si gaar ah xafiiska Ra’iisul Wasaaraha kala shaqeynyay amniga doorashooyinka 10-kii bilood ee la dhaafay.
Taliyaha Nabad-Sugida Gobolka Banaadir, waxaa Saddexdii bilood ee la soo dhaafay ku magacaawnaa, Cilmi Maxamed Baruuke, kaasoo ka yimid dhanka Farmaajo, kadib markii Yaasiin Farey oo xilkaas hayay loo wareejiyay agaasimada KMG ee NISA bishii September.
Baruuke, waxaa xilka u magacaabay, Yaasiin Farey, bishii March 2022, kadib is-badello uu ku sameeyay, Taliyaha Ciidanka Waran, Hoggaanka Baarista NISA, Taliyaha NISA ee Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Ciidanka Ilaalada Shacabka, taasoo muran dhalisay.
Sida la saadaalinayo is-badello waaweyn ayaa ku dhacaya hay’adda NISA, waxaana is-badalladaas qeyb ka ah, magaca hay’adda oo loo baddeli doono, Federal Intelligence And Security Agency [FISA], halkii uu hore ka ahaa National Intelligence And Security Agency.
Mahad Salaad oo shantii sano ee la soo dhaafay mucaarad xooggan ku ahaa nidaamkii Farmaajo, ayaa xilliyo kala duwan eedo waaweyn u jeediyay hoggaankii sare ee hay’adda iyo saraakiil gaar ah, kuwaasoo uu ku tilmaamay in ay NISA u adeegsadeen dano gaar ah.
Magacaabidda Warbac, ayaa ku soo beegmeysa xilli uu socdo is-baddel guud oo lagu sameynayo hoggaanka hay’adaha amniga, oo intooda badan ku milnaa siyaasadda sanadihii la soo dhaafay, wuxuuna noqday shaqsigii labaad ee is-baddelka amniga qeyb ka noqda, kadib agaasimaha isaga magacaabay ee Mahad Salaad.